Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra! : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 September 2019	• 12 Comments
Lehilahy mahatsikaiky izy, Wilson Boldewijn, izay hita teo amin'ny resaka nataoko taminy volana vitsivitsy lasa izay (jereo eto). Ny otrik'aretina amin'ny fitaovan'ny ondry dia toa ny ondry hafa ary noho izany toa tsy manohintohina. Nanomboka andian-dahatsoratra misy dokambarotra i Wilson izay ahitana ny teoria-mpiray tsikombakomba lehibe izay, hoy ny De Telegraaf, dia mivezivezy ihany. Ity dia mitondra ny tompon'andraikitra amin'ny fanoherana voafehy, George van Houts, manoloana ny fakantsary, i Silvan Schoonhoven, "mpitati-baovao fampihorohoroana" ao amin'ny Telegraaf. Tokony ho hitanao toy izany. Ny iray dia ampiasain'ny mpiandry omby mba hanomezana endrika ny fitsikerana ny henan-kena ary ny iray dia mampiseho ny mpamono azy; ny mpiandry izay mamantatra ny sakafony.
Ireo teoria amin'ny fikaonan-doha dia mety hahazo fanohanana. Azo antoka fa raha ahodinao amin'ny fomba toy izany izy ireo dia misy ny tolo-kevitra izay fantatrao mialoha fa afaka mandondona azy ireo amin'ny dingana manaraka ianao (ny baomba ao ambany roa). Ireo teoria amin'ny fikomiana dia mety hivoatra amin'ny antony iray lehibe. Io antony io dia azo jerena amin'ny hoe mifandray izy ireo amin'ny 'hevitra ankavanana' na ny marika 'ankavanana' (anglisy ho an'ny 'havanana'). Raha azonao atao ny mampifandray an'io vondrona io, izay mieritreritra izany, amin'ny hetsika ara-politika ary mamela ihany koa ny hetsika ho tonga hery ary avy eo hampandeha tanteraka ny toe-karena, dia hiatrika izany vondrona rehetra izany ianao ary ny tsikera rehetra tao anaty fifanintsanana iray. .
Jereo eto ny tatitra Telegraaf ary vakio eo ambany.
Hitantsika izay mitranga any Etazonia miaraka amin'i Donald Trump sy UK miaraka amin'ny hetsika Brexit. Ao Brezila dia ilay "mety" Jair Bolsonaro ary tao amin'ny faritra hafa eropeana ihany koa dia nahita ny fiakaran'ny havanana, fa ny fanonganana voafehy an'io marika io dia efa mandeha (jereo eto ny fanazavana feno). Mety manomboka manomboka mino ny firaisana tsikombakomba ianao; na amin'ny dikan-izany ihany no namboarin'ny hery mitovy. Ny fomba tsara indrindra hitazonana ny fanoherana dia ny fifehezana tena. Izany no antony itarihana anao hiala amin'ny tranonkala iray toy izany ary izany no mahatonga ny anarako ho mainty isaky ny forum sy amin'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny media sosialy ary nodoran'ny sangan'asan'ny fanjakana (mpiasa an-trano sy telefaona ao ambadiky ny mofon'ny lalina), ka ianao dia milomano ao anaty harato miaro amin'ny fiaramanidina voafehy.
Raha ny marina dia afaka milaza isika fa tsy misy dikany intsony raha ny fahazavana momba ny 911 dia tonga maivana. Raha tsy mino ny horonantsary ofisialy 911 ianao dia efa miverina amin'ny alàlan'ny vondrona 'mpikirakira tsikombakomba' ary mifandray amin'ny marika 'mety'. Raha misy krizy lehibe ary azonao atao ny mametraka azy ao amin'ny kiraron'andriana ao amin'io marika io (raha i Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Thierry Baudet sy ny sisa), avy eo ny sisa amin'ny fiaraha-monina dia maneso ny tarika ary ny tsirairay dia lasa. nentina niverina tany amin'ny haino aman-jery mahazatra sy ny filaharana politika taloha. Amin'izay dia ho tonga ny krizy lehibe tahaka izao.
Raha ny marina, manodidina ny 911 dia azonao atao ny milaza fa misy antony ampy hanangonana tsikombakomba, na manao ahoana na manao ahoana i Silvan Schoonhoven manao izay tsara indrindra mba hanenjana azy. Ilay ‘tantara miendrika blasting’ nihatra taminy kosa, dia toa ny baomba eo am-pototry ny tontolon'ny tsikombakomba 911. Ireo teoria hafa dia azo hodinihina ihany. ny ny fanazavana momba i Judy Woods dia mety ho toa ny azo tsapain-tanana indrindra, fa toa izy koa dia voatsindrona tsara amin'ny andraikiny amin'ny fanonganana ny fanazavana iray mifototra amin'ny fahamarinana. Mila olona iray ihany ianao mifanditra adala tsy azo antoka esory dia vita ianao. Ny famoahana ilay sarimihetsika 'Loose Change' (araka ny nolazain'i Wilson Boldewijn ao amin'ny sarimihetsika telegrama) dia mampiseho mazava tsara ny fomba fitantanana ny mpanohitra manontolo. Izy ireo dia manorina foana amin'ny hadisoana tsy nahy mba hahafahana manala ny tantara amin'ny manaraka.
Fomba iray hafa hipoitra ny mpanohitra dia ao amin'ny 2009. Ny American 911 'hetsika fahamarinana' dia notarihin'ny olona iray antsoina hoe Ace Baker. Baker no tena be mpitia an'i 911 'mpahazo ny fahamarinana' nandritra ny taona maro. Rena tamin'ny haino aman-jery hafa no nandrenesany tamin'ny fandaharana tamin'ny radio maro. Mandra-pahatongan'ny fotoana nahatongavan'i Ace Baker tamin'ny fampisehoana Jim Fetzer namono tena (jereo ny video eto ambany). Farafaharatsiny, izay no feon'izy ireo noho ny poa-basy, fa tsy ela akory dia nivadika ho velona izy ary nitifitra azy indray.
Isaky ny mivoatra ireo teôria tsikombakomba, toy ny ao amin'ny Judy Woods na hafa, dia tsy maintsy manontany tena ianao hoe iza no mamatsy izany fikarohana izany. Vetivety dia afaka manao izany amin'ny paosinao ianao. Ary koa amin'ireo olona rehetra ireo, izay hita fa manana ny vola sy ny vola hamatsiana ny asany, fantatsika izao fa maro no miasa mangingina ho an'ny mpamono. Ny olona eo alohan'ny haino aman-jery hafa (fantatra ihany koa amin'ny hoe "fahamarinana fahamarinana") dia alàlana hisintona efitrano be olona mandritra ny taona maro hifanarahana tampoka, ohatra, ny pedophilia.
Ohatra tsara amin'izany dia i Zen Gardner, izay nanjavona tampoka 2 taona maro lasa izay dia mpitarika ara-panahy ao amin'ny sekta ekstreman'ny zanak'Andriamanitra. Tsy tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny izy (ohatra, herintaona). Tsia, nanapoaka ny 27 nandritra ny taona maro izy. Ny kolotsaina zanak'Andriamanitra dia fantatra amin'ny fampiroboroboana sy fanaovana firaisana amin'ny ankizy kely amin'ny fampianarany. Somary kely fotsiny izany. Na izany aza, ny olona toa an'i Willem Felderhof sy Ole Dammegard, izay nameno ireo efitrano, ohatra, ny fihaonambe Open Mind dia manohy miaro ilay lehilahy sy ny nify (jereo eto en eto). Miaina ao anatin'ny fotoana iray izay sarotra ampahafantarina ny fahamarinana ny olon-tsotra, raha tsy noho ny teknolojia rehetra eny an-tsena (jereo eto). Angamba ny olana lehibe indrindra dia ny hoe ny ankamaroan'ny fanoherana an-tongotra dia avy amin'ny mpamono olona. Na iza na iza manana fahatahorana fambolena dia afaka mieritreritra fa 911 dia asa anaty.
Vakio ao ity lahatsoratra ity ahoana no mandeha amin'ny tsy misy farany, satria zava-dehibe ny hianaranao mampisy fanavahana.
Resaka mivantana an-tariby miaraka amin'i Wilson Boldewijn avy ao amin'ny De Telegraaf: andian-tantara momba ny teorinan'ny fikomiana
Ny komity mpanadihady 911 dia manomboka ny fitoriana ny governemanta amerikana
George van Houts, voromailala ary ny clog gold toy ny harato anaty fiarovana (tavoahangy 911)
Maninona i Martin Vrijland no miresaka momba ny fandrika harato azo antoka toa an'i Robert Jensen, David Icke?
Tags: 911, Divay mahery, niray tetika, tetik'asa fikomiana, tetikady fikomiana, Fehezo tsara, George, Houts, ao anatin'ny asa, Marka, mpanohitra, elatra havanana, Silvan Schoonhoven, Telegraph, dia, Wilson
11 Septambra 2019 ao amin'ny 21: 12
Tsy mampaninona koa na inona izany no niseho.
Raha mamaky ny rantsankazo manga ianao ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony dia haverina ianao.
Olana, fanehoan-kevitra, vahaolana… ..
Firy ny tsipika notsindronin'ny tendan'ny olona taorian'ny 9 / 11. Iza no handray soa avy amin’izany? Ary inona no hahasoa an'io?
Ny bateria avy amin'ny miampy ny minus dia mikoriana tsara indray.
Ankoatry ny zava-misy fa ny olom-pirenena tsotra (tsy CIA na AIVD) dia afaka mijery ora 24, izy ireo koa dia mila manana
mpiasa ao amin'ireny serivisy fiarovana ireny dia nohamarinina, satria tsy fantatrao mihitsy.
Ny zava-drehetra dia natao ho fahita amin'ny antsipirihany farany.
Tsy tafavoaka mihitsy ny serivisy fiarovana satria manamarin-tena ho leaks izy ireo.
Jereo fotsiny ny birao ao amin'ny Basisweg, tsy hilatsaka i Boldewijn… (na izany aza AT5 (ny sekoly ao amin'ny AIVD dia tsy mahazo manao izany), Rahalahy Big 😉 marina ho an'ireo izay milatsaka!
11 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 03
ny Telegraaf ho loharanom-piainana toy izao, tsy tokony ho gaga amin'izany isika .. ny Israeliana mandihy izay niasa ho an'ny Mossad ary nosamborina dia tsy voatonona, ny anaran'i Danny Jowenko dia tsy voalaza na ny famotopotorana an'i Fox mihitsy izay dia nampiseho fa tamin'io fiasa io dia nisy ny mpitsikilo Israeliana am-polony tao amin'ny radar FBI .. Mazava ho azy fa tsy miteny intsony ireo loza Bijlmer, mpilalao toa izany?
ireny divay feno fahasimbana ireny, ny schoonhoven dia tsy maintsy mandalo ho an'ny 'mpanao gazety', tsotra sy tsotra ireo mpanome vaovao ..
12 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 56
io tariby avy am i fox io dia mbola manan-kery, fa tsy tokony hijanona ela loatra amin'izany ... hoy ny olom-boafidy
11 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 13
Alan Sabrosky nilaza tamin'ny resadresaka tamin'ny radio tao 2010, fa ny fisalasalany ny tantara ofisialy 9-11 dia natolotry ny fijoroan'i fijoroan'i Danny Jowenko.
Ilay toerana nahafatesan'i Danny Jowenko
Maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tokana tamin'ny làlana mahitsy tao an-tanàna Serooskerke, Holandy, tamin'ny 16 ny volana Jolay 2011.
Abreu Report dia namoaka lahatsoratra tamin'ny Martsa 02, 2016 9 / 11 Whistleblower dia novonoina tamin'ny tany holandey tamin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina amerikanina.
15 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 24
arakaraka ny porofo ara-tsiansa ihany no jerena, nefa tsy maheno an-telefaona momba izany ianao ..
Caesar Lion Cachet nanoratra hoe:
12 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 44
Mbola anisan'ireo very resy aho izay nieritreritra fa afaka nieritreritra ny tenany. Ankehitriny aho matetika dia manandrana tsy mieritreritra na inona na inona rehefa tonga, ankoatry ny zavatra hafa, mahita ny fahamarinana. Efa hanafoanana tsy tapaka ny saiko aho ankehitriny ary hanasa ny angovo amin'ny fahamarinana ... Avy eo dia ho hitanao fa tsy misy fahamarinana mihitsy. Fa mandehana ary hazavao fa amin'ny fehezanteny vitsivitsy ary inona izany no olana?! Ny hany zava-dehibe dia ny mpandainga an'i satana mahalala fa ny fisian'ireo andian'olona lehibe dia MPIKORAKA FOANA IZANY!
12 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 11
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny "fahamarinana" sy ny "reality". Ity tsy fitoviana ity dia misy endrika maro eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Mieritreritra aho fa ny bisikileta no tena fantatry ny ankamaroan'ny olona, ​​nefa manohy manaiky sy manaraka izany izahay. Ho an'ny elatsika, saika ny tsipika tsara hahafantarana hoe hatraiza no ahafahan'izy ireo mandeha amin'ny laingan'izy ireo.
13 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 25
Manana olona sy olona betsaka indrindra ianao ?! Izaho dia iray amin'ireo olona tsy mahalala ny toerana misy anao!
13 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 33
Nijery fa ...
13 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 57
Fitaovana amin'ny 28 Jona 2001….
14 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 15
ZIO dia lehibe loatra eo amboniny, fa ny vahoaka no namela izany hitranga tsy handray andraikitra ary hiantehitra amin'ny fampielezan-kevitra mahazatra.
tsy afa-bela ireo olona voarohirohy matetika, mbola hihinana hatrany izy ireo mandra-pialany ... dia mijanona izy ireo
16 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 01
avelao fotsiny aho hiteny hoe tsy ratsy izany fambolena 'mangarahan'ny fiompiana matanjaka izany' ary avy eo aho miresaka avy amin'ny zavatra niainanao manokana. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy maniry izany raha tsy misy ny tsy fahatomombanana ara-tsaina, dia miorim-paka lalina ny fandaharana manomboka amin'ny cradle ka hatramin'ny fasana
« Rahoviana i Etazonia no mandoa hetra amin'ny toetr'andro amin'ireto baomba ireto dia alain'izy ireo?
Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny! »
Total fitsidihana: 4.293.235
Ny fanandramana coronavirus covid-19 dia tena mampanaintaina ary mety mandray ny ADN anao
Zandi Eyes op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
Fakafakao op Coronavirus covid-19: izay tsy henonay momba an'i Maurice de Hond sy Willem Engel, fizarana 2
RCS op Very ady sahady? Sa tena hifoha sy handray andraikitra isika?
clairvoyance op Coronavirus, famafazana valala ary faminaniana faminaniana hafa